दैलेख । सोमबार दैलेखको आठविस नगरपालिका –३ निमाईलका एउटै घरका ५ जनाले कर्णाली नदीमा हाम फालेका छन् । आमा सहित ४ जना बालबालिकाले नदीमा हाम फालेकोमा २ जनाको शब भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका नायब प्रहरीउपरिक्षक अनुपम श्रेष्ठले बताए । कर्णाली नदीमा हाम फालेका १४ बर्षिया कल्पना बडुवाल,११ बर्षिया सरिता बडुवालको शब अछामको पञ्चदेवल विनायक […] The post आमा सहित ५ जना कर्णाली नदीमा हाम फाले, २ जनाको शब भेटियो appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
बीस मिनेट बिजुली जाँदा 'हाइ फ्लो' अक्सिजनकै भरमा उपचार गराइरहेका सुत्केरी सहित ६ जनाको मृत्यु
रजनीकान्तलाई 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड'
दक्षिण भारतीय अभिनेता रजनीकान्तले 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड' पाउने भएका छन्। भारतको केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले यसवर्षको 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड' रजनीकान्तलाई दिने घोषणा गरेका हुन्। रजनीकान्तले विगत ५ दर्शकदेखि फिल्म क्षेत्रमा राज गरेको र मनोरञ्जन दिइरहेका कारण अवार्ड दिन लागिएको जावडेकरले बताए। अवार्डको निर्णायकमा आशा भोंसले, मोहनलाल,विश्वजीत चटर्जी, शंकर…
म्यानमार : सेनाविरुद्ध सडकमा फोहोर फालेर प्रदर्शन, अहिलेसम्म ५ सय जनाको ज्यान गयो
घाँस काट्न भनेर ४ सन्तासहित हिँडेकी थिइन् आमा, मदिराको कुलतले उजाडियो परिवार
दैलेखको आठबीस–३ निमायलको एकै परिवारका चार जना कर्णाली नदीमा मृत भेटिएपछि गाउँले सोचमग्न भएका छन्। स्थानीयवासी प्रश्न गर्छन्– ३५ वर्षीया सुकी बडुवाल चार सन्तानसँगै किन नदीमा हेलिन् ? जतिसुकै पीडा भए पनि एक आमाले तिनै सन्तानको मुख हेरेर बाँच्ने आँट किन गरिनन् ? प्रहरी अनुसन्धानले भने पतिले मदिरा सेवन गरी दुःख दिएका कारण सुकी चार सन्तानसहित नदीमा हाम फाल्न बाध्य भएको देखाएको छ। मानसिंह बडुवालले मदिराको कुलतमा परी दिएको यातनाका कारण उनको सुन्दर परिवार उजाडिएको हो। मानसिंहले आइतबार पनि अत्यधिक मदिरा सेव...
हिंसा सहन नसकेपछि नारी दिवसकै दिन छोराछोरीसहित आमाले गरिन् आत्महत्या
दैलेखको आठबीस नगरपालिका–३ निमायलमा एक महिला चार छोराछोरीसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस दिन(हिजो) ती महिलाले घरेलु हिंसाका कारण चार छोराछोरीसहित कर्णाली नदीमा हामफालेर...
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरे 'फौजी कलिङ'को ट्रेलर रिलिज
सोमबार फिल्म 'फौजी कलिङ'को ट्रेलर रिलिज भएको छ। एक फोन कलले कसरी एक सैनिकको घरको माहोल र परिवारको जिन्दगी बदलदिन्छ भन्ने कथावस्तु फिल्मले समेटेको छ। भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले फिल्मको ट्रेलर रिलिज गरेका हुन्। फिल्मबारे विक्रम सिंहले भने ‘हामी सधैँ सैनिकको बलिदानको लागि सधैँ ऋणी छौँ। 'फौजी कलिङ' तिनै परिवारमा…
‘फाइटर’मा ऋतिक र दीपिका
मुम्बई । अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म ‘फाइटर’मा देखिने भएका छन् । उनकै जन्मदिनको अवसर पारेर फिल्मको घोषणा गरिएको हो । फिल्ममा उनको अपोजिटमा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रहनेछिन् । फिल्मको निर्देशन सिदार्थ आनन्दले गर्न लागेका हुन् ।फिल्म अगामि नयाँ बर्ष अर्थात २०२२ को ३० सेब्टेम्बरमा रिलिज हुनेछ । ऋतिकले फिल्मको जानकारी एक टिजर सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गर्दै गराएका हुन् । फिल्म भारतीय सेनाको कुनै सिपाही आधारित हुने अनुमान ऋतिकले सार्वजनिक गरेको टिजरमा समेटेको न्यारेसनबाट अनुमान लगाउन सकि
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशसभा समेत विघटन हुनसक्ने संकेत गरेकी छन् । विराटनगरमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा र सरकारका क्षेत्राधिकार, ऐन र नियमावली भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव पर्न सक्ने बताइन् । यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फे वर्तमान सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख दायित्वमा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइन् । उनले मौलिक हकसम्बन्...
शक्ति देखाउने भन्दै दुई झाँक्री कर्णालीमा हाम फाले
१६ वैशाख, काठमाडौं । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–१ मा धामीको शक्ति देखाउने भन्दै दुई जना कर्णाली नदीमा हाफ फालेका छन् । नदीमा हाफ फाल्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुराले जनाएको छ । प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) अर्जुन रानाभाटले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी …